Huwandu hweVanhu Vabatwa neCovid-19 muZimbabwe Hwokwira Kusvika paZana neMakumi Matatu neVaviri
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pazana nemakumi matatu nemaviri kana kuti 132.
Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi masere nevatanhatu nechirwere ichi kuBeitbridge, Harare neMasvingo nemusi weChitatu.
Munhu mumwe chete pavanhu vose ava ndiye akatapurirwa chirwere ichi munyika asi vamwe vose vakabva kuSouth Africa nedzimwe nyika.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vari kukurudzira vanhu kuti vasachengete hama kana shamwari dzinenge dzatiza munzvimbo dziri kuchengeterwa vanenge vabva kune dzimwe nyika ava.
Vatiwo vanhu vasabatsire vaye vanenge vapoya pamabhodha vachiti izvi zvine njodzi.
Vati vanhu vakadai vanofanira kumhan’arirwa kumapurisa.
Mashoko atumirwa Studio7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zvuru zana negumi nezvipfumamwe kana kuti 119,000 vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica uye vashaya vadarika zvuru zvitatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 3,592.
Vapora vadarika zvuru makumi mana nemasere 48,000.
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu nemazana manomwe ezviuru kana kuti hwadarika 5,7 million, uye vafa vadarika zviuru mazana matatu nemakaumi mashanu nezvishanu, kana kuti vadarika 355, 000.
Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika miriyoni imwe chete nezvuru mazana manomwe kana kuti vadarika 1,7 million.
Vanhu vafa muAmerica vadarika zvuru zana kana kuti vadarika 100,000.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda kuBritain, Dr Brighton Chireka, vaudza Studio7 kuti nzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu dzinofanirawo kuvhenekwa kuti hadzisi idzo here dzave kutonyanya kutapurira vanhu chirwere ichi.